ပန်ဒိုရာ: အိုင်အိုဝါ ရက်စွဲများ အပိုင်း (၃)
၈။ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းဟောပြောပွဲ
စက်တင်ဘာ ၇ ရက်နေ့မှာ စာကြည့်တိုက်မှာ ကျင်းပတဲ့ ကျားမဖြစ်တည်မှု ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ အိုဘားမား မိန့်ခွန်းပြောမယ့် အိုင်အိုဝါ တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကို သွားဖို့ တန်းစီကြပါတယ်။ ဟောပြောပွဲအတွက် အခမဲ့ ဝင်ခွင့် လက်မှတ်တွေကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းကတည်းက အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်မှာ ထုတ်ယူပြီးသားပါ။
(အိုဘားမား ဟောပြောပွဲ လက်မှတ်)
အိုင်အိုဝါပြည်နယ်ဟာ ဒီမိုကရက်နယ်မြေ ဒါမှမဟုတ် ရီပတ်ဘလီကန်နယ်မြေလို့ အတပ်မပြောနိုင်ဘဲ swing state လို့ခေါ်တဲ့ ဟိုဘက်ဒီဘက် မဲရလာဒ်တွေကို အချိန်မရွေးပြောင်းလဲ သွားစေနိုင်တဲ့ ပြည်နယ်တွေထဲက ပြည်နယ်ငယ်တစ်ခုပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းကတော့ အိုဘားမားဟာ အိုင်အိုဝါပြည်နယ်မှာ ပြိုင်ဖက်ပါတီအပေါ်မှာ ၉% အသာနဲ့ အနိုင်ရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ IWP အစီအစဉ်က ဆရာတွေ ကျောင်းသားတွေ အပါအဝင် တက္ကသိုလ် အသိုင်းအဝိုင်းကတော့ ဒီမိုကရက်ကို တက်တက်ကြွကြွ အားပေးကြသူတွေပါ။
တန်းစီနေတုန်းမှာ မိုးဖွဲဖွဲ စရွာပါတယ်။ ဟောပြောပွဲကို လာနားထောင်ကြသူတွေဟာ ကလေးသူငယ် လူကြီးလူငယ် ကျားမ မရွေး စုံလင်လှပါတယ်။ အများစုကတော့ လူငယ်လူရွယ် ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ရုရှက အလီနာကတော့ သတင်းထောက်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သူပီပီ တန်းစီနေကြတဲ့ IWP စာရေးဆရာတွေကို ဗီဒီယိုရိုက်ရင်း “ဒီမိုကရက်ပါတီကို ထောက်ခံသလား။ အိုဘားမားကို ဘာဖြစ်လို့ အားပေးတာလဲ” စသည်ဖြင့် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးမေးခွန်းတွေနဲ့ အင်တာဗျူးနေပါတယ်။
လမ်းမှာ ရေသန့်ဗူးတွေ အလကား ဝေပါတယ်။ ရင်ထိုးတွေ တီရှပ်တွေ ရောင်းကြပါတယ်။ ဟောပြောပွဲ ကျင်းပမယ့် Jessup Hall ရှေ့က မြက်ခင်းပြင်ကို ရောက်ခါနီးမှာတော့ လူတွေအားလုံးဟာ ထီးတွေ၊ ရေဗူးတွေ၊ မီးခြစ်တွေ၊ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ သတ္ထုပစ္စည်းတွေ၊ အချွန်အတက်တွေ ပါလာခဲ့ရင် လုံခြုံရေးစခန်းတွေမှာ စွန့်ပစ်ထားခဲ့ရပါတယ်။ မြက်ခင်းပြင်ထဲကို လှမ်းအဝင်မှာ ရေသန့်ဗူးတွေ ပြန်ဝေပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါ ဝေတဲ့အခါ ရေသန့်ဗူးတွေမှာ အဖုံးမပါပါဘူး။
နေ့လည် ၁ နာရီကစပြီး ဝင်ခွင့်ပြုထားတယ် ဆိုပေမယ့် လုံခြုံရေးကြောင့် အိုဘားမား ရောက်လာမယ့် အချိန်အတိအကျကို ပြောမထားပါဘူး။ မတ်တပ်ရပ်နေကြတဲ့ လူအုပ်က တဖြည်းဖြည်း ထူထပ်လာတဲ့အချိန်မှာ မိုးကလည်း ပိုပြီး သည်းလာပါတယ်။ တချို့လူတွေကတော့ ပလတ်စတစ်မိုးကာလေးတွေ ပါလာတော့ ခြုံထားကြပါတယ်။ ကျွန်မက လူ မိုးစိုမှာထက် လက်ထဲက ကင်မရာလေး စိုမှာကို ပိုပြီး စိုးရိမ်နေမိပါတယ်။ လူအုပ်ထဲက ပြန်တိုးထွက်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းက သစ်ပင်အောက်မှာ မိသားစုတစ်ခုနဲ့အတူ မိုးခိုနေလိုက်ပါတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ အမေရိကန်အလံတွေနဲ့ အိုဘားမားပါတီရဲ့ ကြွေးကြော်သံဖြစ်တဲ့ FORWARD ဆိုတဲ့ အပြာရောင်စာတန်းတွေကို မြင်နေရပါတယ်။ မိန့်ခွန်းစင်မြင့် နောက်တည့်တည့် ကျွန်မတို့ မရောက်နိုင်တဲ့ တစ်နေရာမှာလည်း ပွဲကြည့်စင် လှေခါးထစ်တွေပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး အနီးကပ် အားပေးနေသူတွေလည်း ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာကို သီးသန့် ကာထားပါတယ်။
(အိုဘားမား မိန့်ခွန်းနားထောင်နေသူ ပရိသတ်)
ညနေ ၄ နာရီကျော်လောက်မှာ အိုဘားမား ရောက်လာပါတယ်။ ကံကောင်းစွာပဲ မိုးကလည်း တော်တော် စဲသွားပါတယ်။ ကျွန်မလည်း ကင်မရာလေးကို ကိုင်ပြီး လူအုပ်ထဲကို ပြန်တိုးရပါတယ်။ ရှေ့မှာ လူတွေအတော်များများ ခံသွားပြီမို့ မားမားမတ်မတ် အနောက်တိုင်းသားတွေကြားမှာ ကျွန်မအရပ်နဲ့ ခြေဖျားထောက်ပြီး မနည်းကြည့်ရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ ကင်မရာမှာလည်း အနီးကပ်ဆွဲရိုက်တဲ့ zoom မပါတာမို့ ဝေးဝေးက ဓာတ်ပုံခပ်သေးသေးပဲ ရလိုက်ပါတယ်။
(အိုဘားမားကို ခပ်လှမ်းလှမ်းက မြင်ရပုံ)
အိုဘားမားက နာရီဝက်လောက် မိန့်ခွန်းပြောသွားပါတယ်။ သူဟာ လူလတ်တန်းစားတွေအတွက် အဓိကထားပြီး ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေ အများအပြားရှိတဲ့ ကျောင်းမြို့နဲ့ လိုက်လျောညီထွေစွာပဲ ပညာသင်စရိတ် ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးမယ့် မူဝါဒတွေကို အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားခဲ့ပါတယ်။ “ပညာရေးဆိုတာ လူလတ်တန်းစားဘဝအတွက် လက်မှတ်ပဲ” (Education is the ticket toamiddle-class life) လို့ ပြောသွားပါတယ်။ လူတွေက “နောက်ထပ်လေးနှစ် နောက်ထပ်လေးနှစ်” (Four more years! Four more years!) လို့ ကြွေးကြော်ကြပါတယ်။ ဆက်ပြီးတော့ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပံ့ပိုးမှုတွေ ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအပါအဝင် အခြားသော ခေါင်းစဉ်တွေကို ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျဆင်းနေတဲ့ စီးပွားရေးကို အလျှင်အမြန် နာလန်ထူလာအောင် လုပ်ဖို့ မလွယ်ကူဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သမ္မတဟောင်း ဘီလ်ကလင်တန် Bill Clinton ပြောခဲ့တဲ့ စကားကို ကိုးကားသွားတာကိုလည်း သတိပြုမိပါတယ်။
ကျွန်မတို့နိုင်ငံက မဲဆွယ်ပွဲတွေနဲ့ အဓိက ကွာခြားတဲ့ အချက်ကတော့ သူတို့ဆီမှာ သူတို့ပါတီ အနိုင်ရရင် အကောင်အထည်ဖော်မယ့် မူဝါဒတွေအကြောင်းကို လိုအပ်ရင် ကိန်းဂဏန်းတွေနဲ့ တကွ အသေးစိတ်၊ ပညာရပ်ဆန်ဆန်၊ ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် ရှင်းလင်း ပြောပြပြီး မဲဆွယ်ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပြည်သူတွေကလည်း ဘယ်မူဝါဒကို ကျင့်သုံးရင် ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေ ရှိနိုင်မယ်ဆိုတာကို ပြန်လည် ဝေဖန်ဆွေးနွေး တတ်ကြတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပြီး မိမိတို့ နှစ်သက်တဲ့ မူဝါဒတွေကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့် ပါတီကို မဲပေးဖို့ အသင့်ဖြစ်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဆီမှာတော့ အမတ်လောင်းတွေ မိန့်ခွန်း ပြောတဲ့အခါ ကျွန်မတို့နဲ့ စိမ်းနေသေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်၊ ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ သန့်ရှင်းကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရရဲ့ အခြေခံသဘောသရားတွေကို ပြည်သူတွေ နားလည်အောင် ပြောပြနေကြရတဲ့ အချိန်ပဲ ရှိသေးတယ် လို့ ထင်မိပါတယ်။ လာမယ့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ ကျွန်မတို့နိုင်ငံက ပါတီတွေရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်ချက်နဲ့ သူတို့အားသန်တဲ့ မူဝါဒတွေကို ပိုပြီး နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အသေးစိတ် ဆွေးနွေးလာကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
၉။ ကျန်းမာရေးနဲ့ စားရေးသောက်ရေး
အိုဘားမား ဟောပြောပွဲသွားခဲ့တဲ့ နေ့က မိုးမိလာပေမယ့် ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ မဖျားမနာခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မဟာ အေးတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ မတည့်သူပါ။ ရောက်ရောက်ချင်းမှာတော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ အအေးမိလာခဲ့တာနဲ့ ဆက်ပြီး အတော်ကြာကြာ ချောင်းဆိုးနေခဲ့ပါတယ်။ တခြားနိုင်ငံက ရောက်လာတဲ့ စာရေးဆရာ အချို့လည်း အဲဒီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။
IWP ကျောင်းက ကျွန်မတို့ကို ကုန်တိုက်ကြီးတစ်ခုကို တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ အဲဒီက ဆေးဆိုင်မှာ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းပြီး ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး အရည်နဲ့ ငုံဆေးပြားတွေ ဝယ်ရပါတယ်။ အစီအစဉ်တွေ အတော်များများက စကားပြောရမှာတွေရှိပြီး၊ အားလပ်ချိန်တွေမှာလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် မိတ်ဆက်မေးမြန်း ပြောဆိုရတာတွေ များတဲ့အတွက် ချောင်းဆိုးခြင်းဟာ အတော်ဒုက္ခပေးပါတယ်။
ချောင်းဆိုးမပျောက်ခင်မှာ ကြုံရတဲ့ နောက်တစ်ခုကတော့ ခြေထောက်နာတာပါ။ ခရီးဆောင်အိတ်ထဲမှာ မဆန့်တဲ့အတွက် ဖိနပ်တွေ များများစားစား ယူမလာခဲ့ပါဘူး။ လမ်းလျှောက်ရှူးဖိနပ် လိုလာရင် ဟိုရောက်မှပဲ ဝယ်တော့မယ်လို့ ကြံစည်ထားခဲ့ပါတယ်။ နေ့စဉ်စီးဖို့အတွက် ကျွန်မပါသွားတဲ့ ကြိုးသိုင်းဖိနပ်ထူလေးဟာ စင်ကာပူမှာရော ရန်ကုန်မှာပါ အတော့်ကို သက်တောင့်သက်သာ ရှိပေမယ့် တောင်ကုန်းလေးတွေ အဆင်းအတက်များတဲ့ အိုင်အိုဝါမြို့လေးနဲ့ မကိုက်ညီခဲ့ပါဘူး။
တစ်နေ့တော့ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ဖို့ မြို့ထဲကို လမ်းလျှောက်သွားကြပါတယ်။ ဒီမှာ မြို့ထဲသွားတာလောက်ကို အားလုံး လမ်းလျှောက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။ တခြားမြို့တွေနဲ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရပ်ကွက်တွေကို သွားတာလောက်ပဲ ကားစီးကြတာပါ။ ဘဏ်ကိုရောက်တော့ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် မေ့ကျန်ခဲ့တာနဲ့ တစ်ခေါက်ပြန်ယူရပါတယ်။ ကျွန်မလိုပဲ စာရွက်စာတန်း မေ့ကျန်ခဲ့တဲ့ ချီလီစာရေးဆရာ နဲ့ အတူတူလမ်းလျှောက်ပြန်လာတဲ့အခါ သူ့ခြေလှမ်းကျဲကြီးတွေကို အမီလိုက်မိရင်း အဲဒီနေ့ညနေရောက်တဲ့အခါ ကျွန်မရဲ့ ခြေဖဝါး ကြွက်သားတွေက ထောက်လို့ မရအောင် နာလာပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာ တော့ ပိုဆိုးလာတာနဲ့ မြို့ထဲက စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ လမ်းလျှောက်ဖိနပ်နဲ့ ခြေအိတ်ထူထူတစ်စုံ ဝယ်လိုက်ရပါတယ်။ အိမ်ကပါလာတဲ့ လိမ်းဆေးတွေလိမ်း ပတ်တီးစည်းပြီး တစ်ပတ်လောက်ကြာမှ ကောင်းကောင်း ပျောက်သွားပါတယ်။
(အိုင်အိုဝါ တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲက မြင်ကွင်း)
ခြေထောက်နာ ပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ရာသီဥတု အေးလာတာနဲ့ ကြုံရပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အရေပြားက ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် န်ိမ့်တာနဲ့ မတည့်လို့ ယားယံတတ်ပါတယ်။ ခြေထောက်တွေ လက်တွေမှာရော မျက်နှာမှာပါ အရေပြားတွေကြမ်းပြီး အဖုလေးတွေပေါက်လာပါတယ်။ အိမ်ကယူလာတဲ့ အလှဆီတွေ လိမ်းတာလည်း မသက်သာပါဘူး။ မျက်နှာကိုတော့ CVS pharmacy က ထုတ်တဲ့ day cream နဲ့ night cream ကို ဝယ်လိမ်းတဲ့အခါ တဖြည်းဖြည်း သက်သာသွားပါတယ်။ ခြေထောက်နဲ့ လက်က အနီဖုတွေကတော့ မနိုင်းနိုင်းစနေ ညွှန်းတဲ့ Cetaphil cream ကို လိမ်းမှ ပျောက်သွားပါတယ်။ ဒါကတော့ ကြုံရတဲ့ ကျန်းမာရေး ကိစ္စလေးတွေပါ။
စားရေးသောက်ရေးအတွက်ကိုတော့ မသွားခင်ကတည်းက ဆရာမင်းထက်မောင်က အဲဒီကိုရောက်ရင် Iowa House Hotel အောက်က စားသောက်ဆိုင်တန်းက ဆူရှီဆိုင်ပိုင်ရှင် ကိုရာဇာ ကိုသွားတွေ့ပါလို့ မှာလိုက်ပါတယ်။ ဆရာ IWP တက်တုန်းက ကိုရာဇာတို့အိမ်မှာ မြန်မာအစားအသောက်တွေ မကြာခဏ သွားစားဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ နေဘုန်းလတ် ရောက်လာတဲ့အခါ ကျွန်မနဲ့ နေဘုန်းလတ်တို့ဟာ ကိုရာဇာ ကို ဆက်သွယ်ကြပါတယ်။ ကိုရာဇာနဲ့ သူ့ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား၊ မွန်တိုင်းရင်းသားလေးတွေဟာ အလွန် သဘောကောင်း ဖော်ရွေကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ အိုင်အိုဝါမြို့မှာ နေထိုင်ကြတဲ့ တစ်ခုတည်းသော မြန်မာမိသားစုလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ အိုင်အိုဝါမြို့ကို နှစ်တိုင်းလာမယ့် မြန်မာစာရေးဆရာတွေကို သူတို့က မျှော်နေကြတာပါ။ သူတို့က ကျွန်မတို့ကို ထမင်းပေါင်းအိုးတစ်အိုးနဲ့ ဆန်တစ်အိတ် ပေးပါတယ်။ သူတို့အိမ်မှာ ထမင်းဟင်း လာစားဖို့၊ လာချက်ဖို့လည်း အမြဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ အပြင်မှာလည်း လိုက်ကျွေးပါသေးတယ်။
(ကိုရာဇာရဲ့ အိမ်မှာ သူ့ရဲ့မိသားစု၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနဲ့ ညနေစာစားပြီး အမှတ်တရ)
သူတို့ပေးထားတဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ကျွန်မအခန်းမှာ ထမင်းချက်စားဖြစ်ပါတယ်။ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် မီးဖိုထဲမှာ တချို့ဟင်းလေးတွေ ကြံဖန်ချက်ပြီး နေဘုန်းလတ်နဲ့ ခွဲဝေစားဖြစ်ကြပါတယ်။ အိုင်အိုဝါ မြို့ထဲမှာလည်း တရုတ်စားသောက်ဆိုင်၊ အိန္ဒိယစားသောက်ဆိုင် အနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ အာရှအစားအသောက် စားချင်တဲ့အခါ တချို့ရက်တွေမှာ အဲဒီဆိုင်တွေမှာ သွားဝယ်စားဖြစ်ပါတယ်။ အိုင်အိုဝါနယ်သားတွေကလည်း ဖော်ရွေကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကို ဖိတ်ခေါ်ကျွေးမွေးတဲ့ မြို့ခံတွေအကြောင်းကို နောက်တော့ ဆက်ပြောပြပါဦးမယ်။
ကျွန်မက လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးတစ်လုံးကိုလည်း ဝယ်ထားပါတယ်။ ရေနွေးကြိုဖို့နဲ့ ကြက်ဥပြုတ်စားဖို့ပါ။ ဟိုတယ်ခန်းထဲမှာကတော့ ကော်ဖီဖျော်စက်ပဲ ပေးထားပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်စာရေးဆရာမ ဂျန် ဟာ ကြက်ဥပြုတ်ချင်ရင် ကျွန်မအခန်းကို လာပြုတ်ပါတယ်။ အီရတ်က ဂူလာလာ ကတော့ ကျွန်မတို့ချက်လေ့ရှိတဲ့ သီးစုံကုလားဟင်းဆန်ဆန် အသီးအရွက်မျိုးစုံပါတဲ့ အီရတ်အစားအစာကို သူ့အခန်းမှာ မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် မီးဖိုနဲ့ ချက်တဲ့အခါ ကျွန်မကို ခေါ်ကျွေးပါတယ်။ ဟင်းထဲမှာ ထမင်းကိုပါ ထည့်ချက်တာပါ။ အီရတ်ရဲ့ ပဲနီလေးဟင်းချို ချက်ပုံကတော့ ကျွန်မတို့ဆီမှာ ချက်တာနဲ့ အတော်တူပါတယ်။
ကျွန်မက မုန့်ဟင်းခါး ဟင်းရည်အခြောက် တစ်ထုပ် ပါသွားခဲ့တယ်။ ဗီယက်နမ်က လာတဲ့ ကြာဇံတစ်မျိုးက ပြုတ်လိုက်ရင် မုန့်ဟင်းခါးဖတ်နဲ့တူတယ်လို့ ကိုရာဇာတို့က ညွှန်းတာနဲ့ အဲဒီကြာဇံခြောက်ကို ဝယ်ပြုတ်ပြီး နေဘုန်းလတ်၊ ဂူလာလာတို့နဲ့အတူ မုန့်ဟင်းခါး ချက်စားဖြစ်ပါသေးတယ်။ တခါတရံမှာ ကြက်ဥကိုမွှေပြီး ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကြက်သွန်နီ၊ ဆား၊ ငရုပ်သီးစိမ်းနည်းနည်း၊ ဆီနည်းနည်းထည့်ပြီး မိုက်ကရိုဝေ့ဗ် မီးဖိုထဲကို တစ်မိနစ်လောက် ထည့်၊ Omelet ကြက်ဥမွှေကြော် လုပ်ပြီး ကျွန်မနဲ့ နေဘုန်းလတ်တို့ ဟိုတယ်က မနက်စာခန်းထဲမှာ စားကြတဲ့အခါ ကိုရီးယားစာရေးဆရာ ဟေးအီစူးနဲ့ အာဖဂန်နစ္စတန် စာရေးဆရာ မိုဟစ်တို့က လာမြည်းကြည့်ကြပြီး အလွန်နှစ်သက်ကြလို့ သူတို့အတွက်လည်း ထပ်ချက်ကျွေးခဲ့ရပါသေးတယ်။
အချိန်ကြာလာတဲ့အခါ စာရေးဆရာတွေဟာ ကိုယ့်ဒေသက အစားအသောက်တွေကို လွမ်းလာကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ အားလပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ သူ့နိုင်ငံ ကိုယ့်နိုင်ငံက အစားအသောက်တွေအကြောင်းကို ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ စင်ကာပူက စတက်ဖနီနဲ့ကတော့ ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်လုံး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ စင်ကာပူ အစားအသောက်တွေအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြပါတယ်။ အိမ်နဲ့ဝေးရာမှာ အစားအသောက်ဟာလည်း မိတ်ဆွေတွေကြားက ခင်မင်ရင်းနှီးမှုကို တိုးပွားစေပါတယ်။
၁၀။ “ယနေ့ကမ္ဘာ့စာပေ” ဆွေးနွေးပွဲအစီအစဉ်
ယနေ့ကမ္ဘာ့စာပေ (International Literature Today) ဟာ IWP စာရေးဆရာတွေအားလုံး မဖြစ်မနေ ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးရတဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုပါ။ ဒီအစီအစဉ်ကို အိုင်အိုဝါ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဘွဲ့ကြိုတန်း စာသင်ခန်း တစ်ခန်းမှာ တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ကျင်းပပြီး ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုမှာ စာရေးဆရာ ၃ ယောက်ကနေ ၄ ယောက်အထိ ပါဝင်ကြပါတယ်။ ဆွေးနွေးဖို့ အလှည့်ကျသူတွေသာမက အခြား IWP စာရေးဆရာတွေပါ တက်ရောက်နားထောင်လေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ စာရေးဆရာတွေဟာ သူတို့နိုင်ငံက စာပေမြင်ကွင်းကို မိနစ် ၂၀ လောက် အကျဉ်းချုံး ပြောပြတတ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ စာပေမြင်ကွင်းတွေထဲမှာ ဘာသာပြန်စာပေ၊ စာပေစိစစ်ရေး၊ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ၊ တိုင်းရင်းသားစာပေ၊ စာပေတိုးတက်ပုံသမိုင်း အစရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ပါဝင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အိုင်အိုဝါကျောင်းသားတွေဟာ စာရေးဆရာရဲ့ လက်ရာတွေကို ကြိုဖတ်ထားကြပြီး မိနစ် ၂၀ စာလောက် မေးခွန်းတွေ မေးမြန်းလေ့ရှိကြပါတယ်။
စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကျွန်မနဲ့အတူ ဆွေးနွေးမယ့် စာရေးဆရာတွေကတော့ ပါကစ္စတန်က ဘီလယ် တန်ဝီရာ (Bilal Tanweer) နဲ့ ဖိလစ်ပိုင်က ဂျန်နီဗီး အာစန်ဂျို (Genevieve Asenjo) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မက နောက်ဆုံး ဆွေးနွေးရသူပါ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီက IWP ရဲ့ အကြံပေးတစ်ဦး ဖြစ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာဌာနက ပရော်ဖက်ဆာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပီတာ နဇာရက် (Peter Nazareth) နဲ့ စကားပြောဖြစ်ကြတဲ့အခါ သူက မြန်မာနိုင်ငံက ကဗျာတွေ ပြောင်းလဲလာပုံ အကြောင်းကို သိချင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွန်မက ဒီကိုမလာခင်ကတည်းက မြန်မာကဗျာအကြောင်းကို ပြောမယ်လို့ ကြံရွယ်ပြီး ကဗျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်စာတန်းတချို့ကို ဖတ်ရှုပြင်ဆင်လာခဲ့ပါတယ်။ လတ်တလော ကိုးကား စာအုပ်တွေထဲမှာ ဆရာသစ္စာနီပေးလိုက်တဲ့ “မော်ဒန်ရှင်းတန်း နှင့် မြန်မာကဗျာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု” စာအုပ်၊ ကိုမိုးဝေး ဆီက ကော်ပီဆွဲလာတဲ့ “ဆရာမျိုးသန့်ရဲ့ မဂ္ဂဇင်းဆောင်းပါး စုစည်းမှုတွေ”၊ ဆရာဇေယျာလင်းရဲ့ “ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ခေတ်ပြိုင်မြန်မာကဗျာ အလားအလာများ”နဲ့ အခြား စာအုပ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာ ကဗျာတွေအကြောင်းကိုတော့ အကျဉ်းချုံးပဲ ပြောပြလိုက်ပြီး ခေတ်စမ်းစာပေနဲ့ နောက်ပိုင်းခေတ်တွေက မြန်မာကဗျာ ပြောင်းလဲလာပုံနဲ့ နိုင်ငံရေး လူမှုရေး သမိုင်းနောက်ခံတွေကို ပါဝါပွိုင့် စလိုက်ရှိုးနဲ့ မိနစ် ၂၀ ကျော်စာ ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ ခရစ္စတိုဖာ မာရေးလ်ကတော့ ခရီးသွားနေလို့ အဲဒီနေ့က မရှိပါဘူး။ နာတာရှာနဲ့ ကျောင်းသားတွေကပဲ ပြန်ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဒီအတန်းမှာလည်း နာတာရှာက ကျွန်မရဲ့ နာမည်တွေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နာမည်ကို မြန်မာစာလုံးနဲ့ ရေးပြခိုင်းပါတယ်။ ဒီအတန်းက ကျောင်းသားတွေကတော့ စီနီယာတွေဆိုတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အသေအချာ ကြားဖူးကြပါတယ်။ ပြီးတော့ နာတာရှာက ကျောင်းသား တချို့ရဲ့ မေးခွန်းတွေကို မေးပေးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စာပေ လွတ်လပ်မှုအခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းတချိုနဲ့ ကျွန်မရဲ့ ကလောင်နာမည်ကို ဘယ်လို ယူဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ပြန်ဖြေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(ယနေ့ကမ္ဘာ့စာပေ ဆွေးနွေးပွဲမှာ ရှင်းလင်းပြောပြနေစဉ်)
ဆွေးနွေးပွဲမှာ အချိန်မရလို့ မမေးလိုက်ရတဲ့ မေးခွန်းတွေကို နောက်တစ်နေ့မှာတော့ ကျွန်မဆီကို IWP ရုံးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မေရီ (Mary Nazareth )က ယူလာပေးပါတယ်။ (မေရီဟာ အင်မတန် ကြင်နာတတ်ပြီး မိခင်ဆန်သူပါ။ သူက ပီတာရဲ့ ဇနီးပါ။ သူ့ရဲ့ တာဝန်ကတော့ ကျွန်မတို့တွေကို ဟိုတယ်မှာ နေရေးထိုင်ရေး စီမံပေးဖို့၊ စားစရိတ် ထုတ်ပေးဖို့နဲ့ အခြား လိုအပ်တာမှန်သမျှကို ကူညီပေးဖို့ပါ။) “မေးခွန်းတချို့က ငါတို့ကျောင်းသားတွေ ဘယ်လောက် မသိနားမလည်လဲဆိုတာကို ဖော်ပြနေလို့ ရှက်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းသိစေဖို့ ယူလာပေးတာပါ” လို့ မေရီကပြောပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မက မမေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ မေးခွန်းအားလုံးကို သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ အားလုံးပေါင်း ၃၃ခု ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ မြန်မာ့စာပေ မြန်မာ့ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ယေဘုယျမေးထားပါတယ်။ တချို့ကတော့ ကျွန်မရဲ့ ကဗျာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ အသေးစိတ် မေးထားပါတယ်။ မေရီက နှိမ့်နှိမ့်ချချလေး ပြောပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ မေးခွန်းကောင်းတွေကိုလည်း ကျွန်မက သတိထားမိပါတယ်။ အဲဒီထဲက တချို့ကို ဘာသာပြန်ပြီး ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
· မြန်မာနိုင်ငံ စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာ စာရေးဆရာတွေ အနုပညာရှင်တွေအတွက် ဘယ်လို အခက်အခဲတွေ ရင်ဆိုင်ရပါသလဲ။
· ပန်ဒိုရာရဲ့ “လူပြိန်းများမြို့ကိုသိမ်းပိုက်စဉ်” (ဘာသာပြန်) မှာ အဖြတ်အတောက် (punctuation) တွေ အသုံးပြုတာ မတွေ့ရပါဘူး။ နာမည်တွေလောက်ပဲ စာလုံးအကြီးနဲ့ ရေးထားတာမျိုး တွေ့ရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလို ရေးဖို့ စဉ်းစားတာလဲ။ တကယ်လို့ သဒ္ဒါထုံးအတိုင်း အဖြတ်အတောက်တွေသုံးရင် ကဗျာဟာ ဘယ်လို ခြားနားသွားပါမလဲ။
· ပန်ဒိုရာရဲ့ ကဗျာတွေမှာ လုံးဝ မြို့ပြနောက်ခံ ဒါမှမဟုတ် တောရိုင်းနောက်ခံကို တွေ့ရတယ်။ အဲဒီလို လုံးလုံးလျားလျား ဆန့်ကျင်ကွာခြားနေတဲ့ နောက်ခံအခင်းအကျင်း (setting) က စာရေးသူအတွက် ဘယ်လို အရေးပါပါသလဲ။
· ပန်ဒိုရာရဲ့ ကဗျာတွေထဲမှာ အကြမ်းပတမ်း (violent) ဖြစ်တဲ့ သင်္ကေတတွေ တွေ့ရတယ်။ ဥပမာ လက်ဖြောင့်တပ်သား၊ ကျား စတဲ့ စကားလုံးတွေ။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီစကားလုံးတွေကို ကဗျာတွေထဲမှာ မကြာခဏ ဆက်တွေ့နေရတာလဲ။
· ဒီနေ့အတန်းထဲမှာ လေ့လာရတဲ့ ပန်ဒိုရာရဲ့ စာတွေထဲမှာ၊ အထူးသဖြင့် “လူပြိန်းများ မြို့ကိုသိမ်းပိုက်စဉ်” ကဗျာမှာ ပို့စ်မော်ဒန် စာပေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုအတိုင်းအတာ ဘယ်လောက်အထိရှိပါသလဲ။ ဒါမှမဟုတ် ပို့စ်မော်ဒန်နဲ့ ဘယ်လို ပတ်သက်ပါသလဲ။ စာရေးသူရဲ့ ပို့စ်မော်ဒန်အပေါ် နားလည်မှု ဒါမှမဟုတ် ပို့စ်မော်ဒန် ရေးသားမှုစတိုင်အပေါ် စုံစမ်းလေ့လာထားမှုကို သိချင်ပါတယ်။ လူပြိန်းများ ကဗျာထဲက ပို့စ်မော်ဒန် အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်တဲ့ မာရီလင်မွန်ရိုးနဲ့ မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်တို့လို အမေရိကန် ပေါ်ပြူလာကာလချာကို သတိထားမိပါတယ်။ စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်တဲ့ လူပြိန်းကို ထပ်ခါထပ်ခါ သုံးထားတာမျိုးတွေဟာ ပို့စ်မော်ဒန် အရေးအသားအများအပြားမှာ တွေ့ရတဲ့ ချဲ့ကားတွန်းတိုက် ရေးထားပုံမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီလိုပါပဲ ဟစ်တလာ နဲ့ ချေဂွေဗားရား ကဗျာမှာဆိုရင်လည်း ပို့စ်မော်ဒန်ဝတ္ထုအများအပြားမှာ ရေးလေ့ရှိသလို သမိုင်းနောက်ခံကို ထင်ဟပ်ရေးတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်။ ဥပမာ ဒွန် ဒီလီလို (Don DeLillo) ရဲ့ Libra ဝတ္ထုမှာလိုမျိုးပါ။ ပို့စ်မော်ဒန် ဝတ္ထုတွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖတ်ကြသလား ဆိုတာကို ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့်လည်း တကယ်လို့ စာရေးသူဟာ ပို့စ်မော်ဒန် အနုပညာနည်းလမ်းတွေကို တမင်တကာ အသုံးချထားခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် တခြား ဘယ်စာရေးဆရာတွေနဲ့ ဘယ်လိုရေးဟန်တွေက လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသလဲ။ အဲဒီလို ကိုယ့်ကိုလွှမ်းမိုးသူတွေက မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေ ဟုတ်ကြပါသလား။ ကျွန်တော်က မြန်မာနိုင်ငံက တီထွင်ဖန်တီးမှု စာပေရေးသားခြင်း အကြောင်းကို လုံးဝ မသိပါဘူး။ ဒါကြောင့် အဲဒီက စာပေအခြေအနေ ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။
အဲဒီလို မေးခွန်းတွေဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီမေးခွန်းတွေကို ပြန်ဖြေဖို့အတွက် ကျွန်မမှာ အချိန်မရခဲ့ပါဘူး။ အပြင်မှာ တွေ့ကြတဲ့အခါ မေးချင်တာ မေးလို့ရပါတယ် လို့တော့ စာသင်ခန်းထဲမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
(ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ နာတာရှာက ဆွေးနွေးသွားတဲ့ IWP စာရေးဆရာတွေကို ထပ်ပြီး မေးခွန်းမေးချင်တာ၊ အင်တာဗျုးချင်တာရှိရင် သူကနေတစ်ဆင့် ခွင့်တောင်းဆက်သွယ်ပြီး စာတမ်းတစ်ခု ပြန်ရေးတင်ဖို့ ကျောင်းသားတွေကို အိမ်စာပေးခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်က ကျွန်မကို ဆက်သွယ်လာပါတယ်။ သူနဲ့ တစ်ရက်ချိန်းပြီး အမေးအဖြေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကျွန်မရဲ့စာရေးသားခြင်းနဲ့ ဘဝဖြတ်သန်းမှု အကြောင်းကို သူက စာတမ်းငယ်တစ်စောင် ရေးခဲ့ပါတယ်။)
၂၀၁၃ မေလ စတိုင်သစ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ဖော်ပြပြီး။
တပိုင်းပြီးတပိုင်း စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ပန်ပန် ...
စတိုင်သစ် ၀ယ်မဖတ်ဖြစ်လို့ ဘလော့ကပဲ ဖတ်တော့မယ်။ ဗဟုသုတ များစွာရပါတယ်။
အရင်ရက်က အိမ်လည်မလာနိုင်လို့ အပိုင်း၁နဲ့၂ကို
တယ် မမ ရေ...:)
အိုဘားမားနဲ့ တွေခွင့်ရလိုက်တာ ကောင်းလိုက်တာနော်. ပန်ဒိုရီပါမသွားတော့ တို့ ညီမလေး နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့. ဒီပို့ စ်လေးတွေဖတ်ရတိုင်း ဂုဏ်ယူမိတယ် ပန်ရေ.